Maxaabiis ayaa ooda jiidhay Galabta Xabsiga Magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland | maakhir.com
Maxaabiis ayaa ooda jiidhay Galabta Xabsiga Magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland
February 14, 2008 in Oromia
Garoowe:- Sida uu sheegayo war haatan naga soo gaadhay magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland waxa Galabta Saldhiga dhexe ee Magaalada Garoowe ka Baxsaday ilaa 20- Maxbuux oo ku kala eedaysnaa Nabiyo kala gadisan qaarkood waxa la sheegay inay dad laayeen oo lala sugayay Maxkamada in La soo hortaago.
Warka ayaa sheegay inay Maxaabiistaasi xoog ku jeedheen Ilaaladii halkaasi joogtay iyada oo la sheegay inay qaarkood kala wareegeen qoriyihii ay siteen, Maxaabiistaa ayaa waxa la soo warinayaa inay ku kala firdheen gudaha magaalada Garoowe mana jiraan ilaa iyo haatan wax gacanta lagu hayo.
Taliyaha Xabsiga Magaalada Garoowe Gaashaanle C/qani Max’ed Qaraf ayaa markii dhacdadaasi ka war bixiyay waxana uu sheegay inuu jiro arinkaasi ay Baxsadeen Maxaabiita tiradaaasi leg, Taliyahaasi waxa uu sheegay inay sabab u tahay dhismaha Saldhiga oo aan ahayn mid La dayac tiray isla markaana ay jeedheen Albaabkii.
Mr Qaraf ayaa waxa uu xusay inay jiraan ilaa Laba Qori oo ay kala wareegeen Ciidankii halkaasi ilaalada ka ahaa markaasi, Taliyahaasi waxa uu walaac xun ka muujiyay sida ay u suuroobayso in Maxaabiistaa Gacanta mar labaad lagu soo dhigo iyaga oo midba meel ka dhacay.
Taliye Qaraf ayaa waxa uu farta ku fiiqay inay Maamulku aanu eegin oo dayac tirin Dhismayaasha Saldhigyada taasina ay keeni karto inay maalin kastay koox Maxaabiis ihi ay ooda goostaan.
Maha markii koowaad ee Saldhiga Magaalada Garoowe ay ooda jiidhaan Maxaabiista halkaasi lagu hor joogaa balse waxa jirta in Horaantii sanadkii aan soo dhaafnay ee 2007- ay xoog Saldhiga ku soo galeen Koox malayshiyo ah kuwaaasi oo Khasab kula baxay Rag dil lagu xukumay oo markaasi Saldhiga ku jiray.
Meesha ay dhacdooyinkaasi is daba jooga ahi ka dhacayaan ayaa ah Magaalada Garoowe oo loogu yeedho inay tahay Caasimada Maamulka Puntland,waxa jira Amaan xumo horle oo iyana ku soo kordhaysa gudaha Magaaladaasi.
« Yuusuf, Zanawi iyo Uweri Musevani ayaa shir Sadex Geesood ah yeesay
Puntland iyo Somaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay Afduubkii Ceerigaabo ka dhacay »